Men In Black-Universal Studios Florida Ride Review
Nyika dzakabatana Florida Orlando
Varume Vane Black Alien Attack
Saka, iwe Will Smith-wannabes unofunga kuti une zvinhu zvokubatana nevarume mu Black? Slip pamumvuri werima, pinda "purogiramu yekutsvaga" paMIB Alien Attack uye ona. Yakabudiswa nefosheni, vashamba vanofamba mumotokari yepamusoro-yakanyanyisa kuburikidza nemumwe mutorwa-akabatwa neNew York City streetcape uye anonongedza pfungwa kuburikidza nekuparadza mabhirigi eweworldworld. Izvo zvipembenene, zvisinei, zvinodzoka zvakare. Zuva kana kuti nguva.
Chifaro Chechi (0 = Wimpy !, 10 = Yikes!): 2.5
Mwoyo munyoro unofamba, mhere-mhere, mhete dzinotyisa uye zvinyorwa
Nzira yekukwezva: Interactive dark ride
Kuremekedzwa kwepamusoro (zvishoma, mumasentimita): 42
Kurumidza kutaura: Usazvidya mwoyo kakawanda uchikwevera chigunzva chako. Ingochengetedza chigumbuso chakabatanidzwa, uye chinogara chichipisa moto unogara wakasimba.
Nzvimbo: Universal Studios Florida
MIB Alien Attack ndeimwe yevatasvi 12 vakanakisa ku Universal Orlando .
Uri kuronga kushanya here? Chengetedza mari uye nguva kuburikidza nekuderedzwa matikiti e Universal Orlando paIndaneti mberi kwekushanya kwako kunotungamirirwa kubva Best of Orlando. Tsvaga zvikwereti zvakakura zve Universal of Cabana Bay Beach Resort kuChamari.
Mufaro unotanga kunze kwechivako. Yakagadzirirwa sechinyaradzo, nyika itsva yakashinga yakarongedza, munenge muna 1964, zviratidzo uye mapepa anozivisa "Nyika Newe" Expo inoratidza. A retro theme song rinotarirwa nevashanyi vanopinda mu glitzy, 60's-era room.
Inzwi rakanyorwa rinotanga mharidzo inonakidza pamusoro pokutsvaga hupenyu muzvinhu zvose, asi inokurumidza kumira apo Agent Zed (Rip Torn, achitora basa rake kubva mufirimu) anorayira "kutsvaga" kupinda muvheti yepachivande. Paanenge apinda mukati, Zed anokumbira ruregerero nokuda kwe "phony theme park". Inongova kungofunga kunodzivirira hunozivikanwa hwemumvuri MIB headquarters.
Unofanirwa kuda Universal nekuda kwekunyepedzera uye kuzvidzora kunofadza.
Ikoti inotora vanhu vanoenda kunharaunda ye Intergalactic Alien Immigration Services uye chairo. Kuratidzira firimu, mukati mutsvuku nyoka yapfuura mukamuri yekuzorora nekutanga kufanana nehupenyu uye hunonakidza vakomana. Vadzidzisi vanozopfuura nokupinda kweAppigration Control, vakazadzwa nemavhidhiyo mavhidhiyo zviziviso zvekudzivirirwa kusingatarisirwi kwekuparadzwa. Zvose zviri mubasa rezuva reMIB.
Pane imwe nguva iyo inotakura motokari, inotanga kupinda muchidzidzo chekudzidzisa. Mushure mokutora mashomanana mashomanana pane zvinowanikwa kune dzimwe nyika zvisingazivikanwi, Zed inotaura pachena kuti ngarava yevatorwa inoputika muManhattan (Oh kwete! Nei izvi zvakanyanya kukurumidzira nguva dzose zvinowanzobuda pakati pehurukuro yepaki yepaki?). Zvechokwadi, zviri kuvadzidzi kuti vadzivirire pasi kubva kune vasungwa vakapukunyuka vasungwa. Kubvira panguva iyoyo zvichienda mberi, inonzi cacophony yezvipembenene zvekare, lasers, nemotokari dzemotokari. (Kana magurugi achipisa, motokari dzemotokari dzinofamba zvakashata kana dzikaisa shoti dzavo pakutanga.)
Iva nemafungiro: Sezvo kana mapoka emabhudzi achivanza mumugwagwa wechinokambaira asingakwanisi dambudziko, vatasvi vari mumotokari akatasva pamwe newe ndezvekuti zvikwata zvinosvibisa. Zvechokwadi, vanofunga iwe nevatasvi vemotokari yako zvakarewo vatorwa.
Nevatorwa vanovandira kwose kwose, zvakaoma kuwana rubatsiro pamutambo wemutambo. Vhidhiyo yemutambo mavens inogona kuva nenguva yakaoma yekuisa puropu pane avo vedu vasina kurumurwa paNintendo. Izvo zvinoshandiswa pfuti hazvibvumiri, uye vatorwa havazivi zvakajeka zvinangwa. Mibhugi inopindura zvakanyanya kudurudza zvakapoteredza pahuma dzavo nemapfupa.
Izvo zvakaomawo kutarisa pamutambo mamiriro ezvinhu nokuti kutasva kunoputirwa neve animatronics yakajeka, sarudzo dzakakosheswa, uye sly visual puns. (Iva wakatarisira mbudzi yemudzimai weStven Spielberg musoro.)
Nekuremekedzwa kose kwakakodzera kuShakespeare, kana zvasvika kumakwikwi eparakiti, nyaya yacho ndiyo chinhu. Ikozvino hut-teknolojia yekwanisi inoputika nokukurumidza kana iyo isingashandisi nyaya huru. Neine mavara anonzi animatronics, maitiro akaisvonaka anotasva motokari, uye kubata, nyaya inonzwisisika, MIB ibasa rinonakidza.
Icho chinokurudzira kupfuura iyo yakafanana shoma-em-up Buzz Chiedza chakakanganiswa paWalt ​​Disney World's Magic Kingdom.
Kufanana nehuwandu hweWorld Orlando , maMIB ane unhu hukuru, mu-yako-chiso chinoguma. Kutora vaeni, chaizvoizvo, kupinda mudumbu rechikara, vanofanirwa kuputira nzira yavo kunze nehondo huru. (Hint: Ino ndiyo nguva yekushandisa iyo kubhenesa tsvuku tsvuku pamotokari yemotokari.)
Zvichienderana nechikwata chega rega chemotokari, rwendo rwacho runopa kuguma kwakawanda. Kunze kwekuti iwe uri muchengeti wemutambo wemavhidhiyo, zvichida Will Smith achakupa iwe kurasikirwa sendof: kuzvidzora, "Zviri nani zororo munguva inotevera, Slick" asati "neuralizes" iwe. Zvadaro zvakare, zvichida iwe unenge uine ruzivo rwakanaka, kusvetuka.
Zvimwe zvinopindirana zvitsva zvekuchengetwa kwepaki
Toy Story Mania paDisney Hollywood Studios
Buzz Lightyear's Space Ranger Spin pa Magic Kingdom
Lego Ninjago The Ride at Legoland Florida
Arabian Nights Dinner Theater muKsimsimmee
Nguva yeMakore Ekare Orlando
Mutungamiri weMubereki ku Universal Orlando's Halloween Horror Nights
Kudzokorora: Cowfish Sushi Burger Bar ku Universal Orlando Resort
Gungwa Guru Orlando neBusch Gardens Tampa Bay Ipai Nomufaro Usingagumi
Kupemberera Zuva raValentine
Fireworks paOrlando Mitambo Miti
Gettysburg: Vakashanyira Vanotungamirira kuGettysburg, PA
6 Lofty Treehouse Vacation Homes Unogona Kuda
Kentucky Derby History uye Lingo
Mamiriro ekunze muSpain munaNovember
Toulouse Travel Guide - Chii chaunofanira kuona nekuita muguta rino rakanaka
Nzvimbo dzakanakisisa dzekushanyira muCentral Texas
Yakaisvonaka Mahombekombe eCentral America
Yenzvimbo Yakanakisisa Yakanakisisa dzeMasikati kuTexas
Washington DC Nenguva